IWee Bush Cottage Bushmills
I-Wee Bush Cottage yindlwana ebekwe kakuhle yeBanga lesi-II eLudwe kwindawo yolondolozo lweBushmills. Le ndlu ihonjiswe kakuhle ibekwe entliziyweni yelali kwaye ibekwe kufutshane nonxweme loMlambo Bush. Sikumizuzu kude kwi-Giant's Causeway, iCarrick-a-Rede Rope Bridge, iDunluce Castle kunye ne-Ballintoy Harbour (apho uMdlalo weTrone wafotwa khona) kunye neBushmills Distillery kukuhamba nje imizuzu emi-2. Ifanelekile ukubaleka kwezothando kwi-2.
I-cottage igcwele i-charm yakudala yehlabathi, ihonjiswe kakuhle kwaye ikhululekile kakhulu. Igumbi lokulala eliphambili linebhonasi eyongeziweyo yebhafu ethandekayo yakudala ejonge kwigadi yabucala yangasemva. Igumbi lokuhlambela eliphambili lineshawari. Igumbi lokuhlala linendawo yokutshisa ilog ethandekayo kubusuku obupholileyo. Iifilimu zothando ziyafumaneka kwi-DVD player. Lo mhlaba unekhitshi elifakwe ngokupheleleyo elinesitovu segesi kunye nee-oveni ezi-2, ii-microwave njl. Itafile yokutyela kunye nezitulo. Igumbi loncedo linomatshini wokuhlamba, isitya sokuhlambela kunye nesomisi. Igadi yabucala engasemva kwepropathi inetafile kunye nezitulo zokutyela i-al fresco kunye ne-bbq. Indawo yokupaka ekhuselekileyo ngasemva kwepropathi.
4.97 ·Izimvo eziyi-98
Simi kumbindi welali, kufutshane nazo zonke iivenkile zalapha ekhaya kunye neendawo zokutyela ezintle. Zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi ziphakathi kwemizuzu embalwa yokuqhuba. IBushmills Distillery yimizuzu embalwa yokuhamba. Kukho ukuhamba okumangalisayo konxweme kwimizuzu nje ukusuka kwipropathi yethu kwaye sihlala sonwabile ukucebisa ngezinto esinokuzibona nokwenza.
Ndiyafumaneka ukuba ndiyafuneka phakathi kweeyure zokungena naphambi ko-7.00pm.